Ungalishintsha kanjani izwi libe yiGoogle Maps 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Ungalishintsha kanjani izwi libe yiGoogle Maps
Njengomhambi omuhle ubulokhu ukhona, wazi kahle I-google maps, okuzohlala kungumlingani wakho othembekile uma kuziwa ekuhloleni izindawo ezingaziwa. Ukulalela imiyalo njalo ngezwi elifanayo, noma kunjalo, kuqala ukubonakala kuyisidina: ngenxa yalesi sizathu, ungathanda ukuqonda ungashintsha kanjani izwi liye kumamephu we-google, ukubuyisela ingcosana "yoqobo" ohambweni lwakho.
Uma kunjalo, lokhu kuyisiqondisi esifanele ukuqala! Eqinisweni, ngezansi ngizochaza ngokuningiliziwe ukuthi ungashintsha kanjani ithoni yezwi lesiphequluli esidumile seGoogle kuzo zombili i-Android ne-iOS. Ngenzela ukuphelela, ngizophinde ngikunikeze imiyalo yokuthi ungawuthola kanjani umphumela ofanayo woMsizi weGoogle.
Kepha kufanele ngilindele into eyodwa ebalulekile: yize ezinye izilimi (njengesiNgisi) zingalungiswa ngezindlela ezahlukene zokukhuluma namathoni, ezinye kungenzeka zingabi nalesi sici. Lokho kusho, uma ufuna ngempela ukuqonda ukuthi ungayishintsha kanjani iringithoni yezwi yesiphequluli se-Google, funda ku: uzothola konke okuchazwe ngezansi. Jabulela ukufunda kwakho futhi ujabule |
Ungalishintsha kanjani izwi libe yiGoogle Maps Android
Ungalishintsha kanjani izwi libe yi-Google Maps Google
Ungashintsha kanjani izwi lomsizi weGoogle
Izinyathelo okufanele zilandelwe shintsha izwi uye kumamephu we-google zilula kakhulu. Uma, ngokwesibonelo, usebenzisa idivaysi ye-Android, kufanele wazi ukuthi uhlelo lokuzula lunomsebenzi wokuzinikela wokushintsha ithoni yezwi.
Ukuze uphumelele ebhizinisini, vula uhlelo lokusebenza lweMephu, usebenzisa isithonjana esisesikrinini sasekhaya noma kudrowa yedivayisi, thinta eyakho isithombe sephrofayili etholakala ohlangothini lwesokunene sebha ephezulu (uma ungaboni isithombe, bheka isithonjana esimele esakho ontanga) bese ukhetha into Ukuqinisekiswa kumenyu evelayo.
Manje thinta amagama Izilungiselelo zesiphequluli futhi, uma unentshisekelo yokwenza ngokukhethekile kumthamo wemiyalo yezwi, sebenzisa amabhokisi angezansi kwamagama Izinkomba zevolumu ukuveza okuthandayo: Okuphansi, Normal o high.
Uma ufuna ukushintsha ithoni yezwi elisetshenziselwa imiyalo yezwi yesiphequluli, thinta inketho Ukukhethwa kwezwi bese ukhetha izwi (noma ulimi) kulabo abatholakala ngokuthinta inketho oyithandayo. Qaphela ukuthi uma usebenzisa olunye ulimi ngaphandle kokuzenzakalelayo, i-Google Maps izoqhubeka ukukunikeza izinkomba-ndlela zokujikajika, kodwa ngeke isakhuluma amagama emigwaqo.
Uma, ngokuphambene nalokho, okwakho kuyi- iPhone, izinto zihluke kakhulu: esimweni sezindaba samanje, empeleni, akunakwenzeka ukushintsha izwi, noma ulimi lwemiyalo enikezwe uhlelo lokusebenza lweGoogle Maps, okungenani hhayi ngokuzimela.
Ukufeza umphumela oyifunayo, kuyadingeka shintsha ngokuphelele ulimi lohlelo: change ezophinde ithinte ulimi lwezinhlelo zokusebenza, i-Siri, izinketho zokufinyeleleka komsindo nayo yonke eminye imisebenzi ehlobene nokubizelwa kwezwi kanye / noma ukufundwa kwesikrini okuzenzakalelayo.
Uma ucabanga ukuthi ushintsho "olunzima" olunjalo lusakufanele, lwenze khipha i-google maps kusuka ku-iOS (ukwenza ukuthepha okude kusithonjana sayo bese ucindezela kuzakhi Susa izinhlelo zokusebenza ed Susa) bese ukhetha ulimi oluthandayo ngokuvula ifayela le- Ukuqinisekiswa ye-iOS, iya ezigabeni Okuvamile> Ulimi neZoni> Ulimi lwe-iPhone.
Uma uhlose ukusebenzisa izwi lesi-Italian noma kunjalo, ngiphakamisa ukuthi ukhethe ifayela le-Isi-Italian (Switzerland), okubandakanya kuphela ukuguqula ithoni yezwi namanye amagama. Kunoma ikuphi, ukukhomba ulimi olufanele, thepha inketho efanele bese inkinobho Shintsha ku- [lingua scelta], ukuqhubeka.
Ngemuva kokushintsha ulimi, qala i-Isitolo sezinhlelo zokusebenza, Ukucinga uhlelo lokusebenza le-Google Maps elikulo (noma sebenzisa lesi sixhumanisi, ukusheshisa izinto) bese uthepha inkinobho Thola (TholangesiNgisi) ukuyilanda futhi kudivayisi yakho. Uma kunesidingo, gunyaza nge-Face ID, i-Touch ID, noma iphasiwedi ye-Apple ID.
Uma konke kuhambe kahle, ngokuzayo lapho uqala i-Google Amamephu, izwi lokuqondisa kufanele "likhulume" ulimi olukhethwe ngaphambilini.
Kodwa-ke, uma ucabanga ukuthi ushintsho olunjalo lukhulu kakhulu kunhloso ofuna ukuyifinyelela, ungacabanga ukusebenzisa I-Apple Amamephu, uhlelo lokusebenza, ngakolunye uhlangothi, olulandela izilungiselelo zezwi ezisetshenziselwa iSiri: ngakho-ke, uma izwi lowesilisa (noma lowesifazane) lilungiselelwe umsizi wezwi, ushintsho luzobonakala naku-Apple Maps.
Ukuze wenze lokhu, iya kumenyu Amasethingi> Siri nosesho IOS, thepha ukuhlukaniswa kabusha Izwi likaSiri bese ukhetha ukusebenzisa izwi le- donna noma lokho kwe indoda ngokuthepha inketho efanelekile.
Ukuze ulungise ivolumu yezikhombisi-ndlela ezihlinzekwa yi-Maps, iya kumenyu esikhundleni salokho Amasethingi> Amamephu I-iOS, thepha okukhethwa kukho Ukuzulazula nezikhombisi-ndlela bese ulungisa amasethingi njengoba ubona kufanelekile, usebenzisa izinketho ezingezansi kwamagama Ukuzulazula ivolumu yezwi.
Uma ufisa, ungangenelela futhi ngezwi le-Umsizi weGoogle: kwezinye izilimi, empeleni, kungenzeka ukusebenzisa amathoni wonkamisa ahlukile noma ukukhulunywa ngokungafani, ngaphandle kokushintsha noma yiziphi izilungiselelo zohlelo.
Uma unesifiso sokusebenzisa lolu hlobo loshintsho futhi olwakho luyisetshenziswa esigqwayizayo sohlelo lokusebenza Android, vulaUhlelo lokusebenza lweGoogle ikubize kusuka kusikrini sasekhaya noma kusuka ekhabetheni, thepha inkinobho […] Okunye ibekwe ezansi kwesokudla bese kuthi entweni Ukuqinisekiswa, ibonakala esikrinini esivelayo.
Manje thinta inketho Umsizi weGoogle, bese kubhalwa Umsizi wezwi ibonakala esikrinini esilandelayo bese ukhetha ithoni yezwi oyithandayo ngokuthepha imibuthano enemibala itholakala phezulu.
Uma, ngokuphambene nalokho, okwakho kuyi- iPhone noma a iPad, qala uhlelo Umsizi weGoogle, thinta okwakho avatar (noma ku iziqalo zegama lakho) etholakala ekhoneni eliphezulu kwesokudla bese ukhetha inketho Umsizi wezwi kumenyu evela kamuva. Ekugcineni, chaza okuncamelayo kwezwi ngokulandela imiyalo efanayo engikunikeze yona kumasekhondi ambalwa edlule, ye-Android.
Indlela ye-asterisk ngekhibhodi